Xikmadaha Dumarka - Xogside-news Xogside
Home BARNAAMIJYADA Xikmadaha Dumarka
Xogside – Amiirka Muminiinta Cumar Ibnu Khadaab (rc) ayaa minbarka masaajidka koray wuxuuna go’aamiyey inaan meherka dumarka laga badin Afar boqol oo dirham sababtoo ah ayuu yidhi Nabigu (scw) kamuu badin meherka dumarkii uu guursaday.
Markuu Amiirkii ka dagay minbarkii ayey gabadh saxaabada ka mid ahayd ah oo xikmad badan ay ku tidhi; “ Amiirkii mu’miniintoow ma waxaad go’aamisay inaan meherka laga badin Karin Afar boqol oo Dirham?
Cumarna ayaa ku jawaabay “ Haa” ha sidaasi ayaan idhi. Gabadhii ayaa tidhi “ Sideebay u noqonaysaa sidaa Amiirkii mu’miniintoow, miyaanad maqal Aayada Quraanka ee Allah (sw) ku yidhi : (وآتيتم إحداهن قنطارا) (ood midkood siisaan Qindaar) Oo macnaheedu badan aad meher u siisaan oo aan xadidnayn. Cumar Ibnu Khadab (rc) ayaa markiiba u jawaabay gabadha xikmadda badan oo yidhi :” Dadka oo dhami way ka fiqihi (Fami) wanaagsan yihiin Cumar ka dibna minbarkii ayuu mar labaad koray isagoo u sheegay dadkii “ In meherka wixi ay doonaan bixiyaan “.
Previous articleMadaxweynaha Somaliland waxa uu xeer Madaxweyne uu ka soo saaray Mamnuucidda Ka Qayb Qaadashada Siyaasada Soomaaliya.
Next articleFaanka Iyo Mushkuladiisa